> Resource > Ladnaansho > WD My Book Data Recovery Tutorial
Sidee baan ka WD My Book External Hard Drive Soo Celinta kartaa faylasha
Waxaan hadda isticmaalay aan 1TB WD My Book Muhiimka ah drive dibadda ku adag tahay inay taageerto kor u files music iyo sawiro qoyska. Waxaan leeyahay gurmad ma drive oo kaliya aan u formatted. Waxaas oo dhan aan muusig iyo sawiro waa la waayay. Waxaan ku saabsan la helo dib files aan. Fikrado kasta? Fadlan ii caawin.
Is dejiya! Xogta ku saabsan WD My Book drive dibadda adag laga yaabaa in laga badiyay sababta oo ah tirtirka, Baadi nidaamka, formatting drive, jeermiska fayraska iyo xataa qalliin aan habboonayn. Ilaa iyo inta aad muusig iyo sawiro aan overwritten by xog cusub oo ku saabsan WD My Book drive dibadda u adag, waxaana suurto gal aad dib u heli kartaa. Waxaa kaliya lagu calaamadeeyay xogta sida geli karin on your drive. Marka khasaaro xogta dhacaya, kaliya aad u baahan tahay in aad eegto barnaamijka xogta WD My Kitaabka oo si degdeg ah aad u caawin.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa talo fiican ee aad u. Barnaamijka dhinac saddexaad Arintan waxay u sahlaysaa in aad ka bogsato xogta ka WD My Book drive adag dibadda ee hab fudud, ammaan iyo khatarta lacag la'aan ah. Its feature awood badan kaa caawinaysaa in aad soo kabsado ku dhowaad dhammaan noocyada file ka WD My Book drive adag dibadda, sida music, sawiro, videos, waraaqaha, iwm, iyadoo aan loo eegayn in aad file waxaa tirtiray, formatted ama u kharribmay.
Waxaad ka heli kartaa version maxkamad barnaamijkan in la soo celiyo files ka WD My Book drive dibadda adag hadda ah!
Qabtaan WD My Book kabashada xogta 3 Talaabooyinka
Kuwa soo socda WD My Book hage kabashada xogta lagu sameeyo Wondershare Data Recovery for Windows. Haddii aad qabto Mac ah, waxaad ka heli kartaa version Mac inay raacaan tallaabooyinka la mid ah inuu ka soo kabsado aad badiyay WD My Book xogta drive dibadda badaan.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada inuu ka soo kabsado xogta ka WD My Book drive dibadda adag ah
Sida aad ka arki kartaa image hoos ku qoran, waxaad heli doontaa 3 hababka soo kabashada kadib markii socda Wondershare Data Recovery on your computer.
Si aad u soo kabsado lumay, tirtiray, formatted iyo formatted files ka WD My Book drive dibadda u adag, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode in lagu bilaabo.
Tallaabada 2 baarista WD My Book drive dibadda adag
Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan warqad drive ee aad WD My Book drive adag dibadda ee suuqa kala guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka xogta laga badiyay waxaa ku.
Haddii files aad WD My Book drive dibadda u adag ayaa laga badiyay sababta oo ah formatting, waxa kale oo aad dooran kartaa "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad WD My Book drive dibadda adag waxaa laga garan karaa your computer sameeyo.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka WD My Book drive dibadda adag
Ugu danbeyn, la ogaado xogta ku saabsan WD My Book drive dibadda adag lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka. Waxaad ka arki kartaa magacyada file in lagu hubiyo sida badan oo ka mid ah macluumaadka aad ku waayay in lagu soo kabsaday kartaa WD My Book drive dibadda adag.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo celiyo si aad WD My Book drive dibadda adag iyaga ku badbaadin degdeg ah ka dib markii hanaanka soo kabashada.